भोजपुर घटना : विवादपछि लछारपछार, त्यसपछि गोली हानाहान | Ratopati
भोजपुर घटना : विवादपछि लछारपछार, त्यसपछि गोली हानाहान
personरातोपाटी संवाददाता exploreकाठमाडौं access_timeअसार २५, २०७६ chat_bubble_outline0
काठमाडौँ– प्रतिबन्धित विप्लव समूहका जिल्ला नेता र प्रहरीबीच भोजपुरमा गोली हानाहान हुँदा प्रहरीसहित २ जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा विप्लव समूहका ओखलढुङ्गा जिल्ला इन्चार्ज नीरकुमार राई र प्रहरी जवान सञ्जिव राई रहेका छन् ।
जिल्लाको शनिबारे भन्ने स्थानमा रहेका पानधारे होटलमा भएको उक्त घटनामा अर्का प्रहरी जवान खोमनाथ भट्टराई घाइते छन् ।
भट्टराइको जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नुरहरी खतिवडाले जानकारी दिए । प्रजिअ खतिवडाका अनुसार भट्टराईको दाहिने कुमको हड्डी भाँच्चिएको छ । स्थानीय प्रशासनले घटनापछि जिल्लामा सुरक्षा तैनाथी बढाएको छ ।
कसरी भयो घटना ? मेयरको बयान
म भोजपुर नगरपालिकाका मेयर कैलाशकुमार आले । बुधबार विहान ८ः४५ बजे भोजपुर नगरपालिका ७ हटियालाइनको पानधारे होटलमा विप्लवका कार्यकर्ता नीरकुमार बसिरहेका थिए । सञ्जोग नै भन्नुपर्छ त्यहीबेला चिया खान सादा पोशाकका प्रहरी सञ्जीव राई पनि होटलमा पुगे । प्रत्यक्षदर्शीका मलाई भनेअनुसार उनीहरुबीच पहिल्यै चिनजान समेत थियो ।
त्यही क्रममा उनीहरुबीच कुराकानी सुरु भयो । कुराकानीकै क्रममा हतियारको कुरा निस्कियो र विवाद बढ्दै जाँदा चर्काचर्की भयो । त्यसपछि उनीहरुबीच केहीबेर लछापछार र ठेलमठेल पनि चल्यो ।
त्यतिकैमा विप्लवका कार्यकर्ता राईले प्रहरीलाई कोखामा गोली हाने । उनी त्यही ढले । उनी ढलेपछि सञ्जिवसँगै रहेका अर्का प्रहरीले नीरकुमारमाथि फायर खोले । त्यसपछि स्थिति तनावग्रस्त जस्तै बन्यो । थप प्रहरी घटनास्थल पुगे । तत्कालै दुवैलाई अस्पताल लगियो । जिल्ला अस्पतालले दुवैलाई मृत घोषणा गर्यो । घटनास्थलबाट प्रहरीले एउटा चाइनिज पेस्तोल र ६ राउण्ड गोली बरामद गरेको छ ।
को हुन् नीरकुमार ?
ओखलढुंगा इन्चार्ज नीरकुमार भोजपुरकै हुन् । उनी भोजपुर जिल्ला षडानन्द नगरपालिका वडानम्बर १३ वोयाका बासिन्दा हुन् । उनी प्रायः भोजपुर र ओखलढुङगा आउनेजाने गरिरहन्थे । प्रहरीका अनुसार उनले भोजपुरमा चन्दा सङ्कलन समेत गर्ने गरेका थिए ।
को हुन् सन्जिव ?
मारिने प्रहरी जवान सञ्जिव राईको घर खोटाङ हो । उनी विगत तीन बर्षदेखि भोजपुरमा कार्यरत थिए । गत निर्वाचनका वेला सन्जिव नेकपा नेता एवं संघीय सांसद सुदन किराँतीका सुरक्षा गार्डका रुपमा पनि खटिएका थिए । नेता किरातीका अनुसार सञ्जिव मिलनसार र कामप्रति निष्ठावान थिए । सांसद किराँतीले घटनाले दुःखी बनाएको प्रतिकृया दिए ।
दुवैको निगरानी बढ्दो
जिल्लाका पत्रकार बुद्ध तामाङका अनुसार गत जेठ सात गते प्रहरीको गोली लागेर घाइते भएका विप्लव समूहका कार्यकर्ता तीर्थराज घिमिरेको मृत्यु भएपछि विप्लव समूहले आफ्ना गतिविधि बढाएको थियो ।
त्यस्तै प्रहरी प्रशासनले पनि विप्लव समूहमाथि आफ्नो निगरानी र सुरक्षा सर्तकता थप बढाएको थियो । जेठ सातमा भोजपुरको धोद्रे जङ्गलमा दुबैपक्षबाट गोली हानाहान भएपछि प्रहरीको गोली लागेर षडानन्द नगरपालिका २ का ३२ वर्षीय तीर्थराज घिमिरेको मृत्यु भएको थियो । तर, विप्लव समूहले आफ्ना कार्यकर्ता घिमिरेको भिडन्त नभई हत्या गरेको आरोप लगाउदै आएको थियो ।
सांसदले मागे जवाफ
भोजपुरमा भएको यो घटनाबारे बुधबार संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पनि कुरा उठेको छ । काँग्रेस सांसद डा. डिला संग्रौला पन्तले भोजपुर घटनाबारे गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाललाई जवाफ दिनुपर्ने बताइन् ।
‘यो संवेदनशील विषय हो । सुरक्षा व्यवस्था के भइरहेको छ ? भोजपुरमा भिडन्त भयो र मान्छेको मृत्यु भएको छ, वास्तविकता के हो ?’ सांसद पन्तको प्रश्न छ ।
पदक विजेता खेलाडीहरुलाई नगर परिक्रमा, १० तस्बिरमा हेरौं
नेपाल–भारत सीमा विवाद अपुताली समस्या हो, समाधान गर्न समय लाग्छ: मन्त्री अर्याल
भारतीय सेना फिर्ता र लिम्पियाधुरा समेत समेटेर नेपालको नक्सा जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन
चाक्सीबारीमा रहेका पौडेललाई देउवाको फोन
भिडियो समाचारः देशभर वर्षासहित हिमपात, कालापानीमा नेपाली सुरक्षाकर्मी राख्ने तयारी
फुटबलरहरुको डिस्को काण्ड : ९० दिन निलम्बन र ५० हजार जरिवाना
पोखरामा आकाशे पुल निर्माण कार्य सुरु